Day: December 6, 2018 - Page 2 - Kichuu
Muddee 6 bara 2018 Xumura Hiriira Nagahaa irratti Ibsa Ejjannoo Qeerroo Magaalaa Adaamaa Hiriira Yeroo Ammaa Kana Magaalaa Adaamaatti Gaggeeffamaa Jiru! Afaan Amhara namni #qulquleesse dubbachuu hin dandeenye magaala Finfinnee keessatti hojjachuu hin qabu jedhu warri #ESAT. Garuu [Read More]
Dhaabonni siyaasaa Oromoo hundumtuu warra biyya bulchaa jirus dabalatee waltajjii tokko irratti wal gahaniiru. Dhaabbileen Siyaasaa Oromoo har’a Finfinneetti walgahanii jiru. Kun waan dursee ta’uu qabu ture. Kun silaa otuu dursee hojjatame, har’a waan biraatu [Read More]
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Muddee 5, 2018 SBO MUDDE 05,2018. Oduu, Haala yeroo irratti ibsa ABO fi Gimbii, Haroo Sabbuu fi naannoo Gaara Mul’ataatti hiriirota geggeeffaman irratti marii hirmaattota waliin taasisame ﻿